Ronaldo oo sameeyay arrin ay ka naxsan yihiin taageerayaasha Juventus + Sawirro | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Ronaldo oo sameeyay arrin ay ka naxsan yihiin taageerayaasha Juventus + Sawirro
Ronaldo oo sameeyay arrin ay ka naxsan yihiin taageerayaasha Juventus + Sawirro
(Torino) 10 Nof 2019 – Bilowgii waxay ahayd Lokomotiv Moscow, haatanna Milan: waxaa markii 2-aad oo xiriir ah muddo 5 maalmood ah la beddeley jookarka Cristiano Ronaldo.
Ha yeeshee, kulankii Champions League haddii uu wiilka reer Portuguese uu kaliya ku ekaaday inuu Sarri u muujiyo inuusan la dhacsanayn bedelka markan wuxuu qaaday tillaabo dheeri ah.
CR7 ayaan markan xitaa salaan u taagin macallinkiisa kaddib markii lagu bedeley Paolo Dybala oo guusha keenay, balse wuxuu toos u aadey qolka lebbiska, isagoon intaa ku ekaane inta gaarigiisa qaatay toos u aadey gurigiisa isla markii ay ciyaartu dhamaatay isagoo aan cidna macasalaamayn.
Arrintan ayaa muujinaysa carada laacibka oo uu macallinkiisu sheegay in aanu xaalad jireed oo wanaagsan ku jirin.
Previous articleDablay weerar ku qaadday gaari ay saarnayd gabar UNSOM u shaqaysa
Next articleArag sida ay QURBA-JOOGTU u dhaqmaan marka ay dibedda joogaan oo barbar dhig marka ay dalkooda joogaan!
(Gaalkacyo) 08 Luulyo 2020 - Warar soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada Daraawiishta Puntland ee kusugan fariisimo muhiim ah oo kuyaala Gaalkacyo ay muujiyeen...